यी डाक्टर, डब्लुएचओको चर्चामा
काठमाडौं । डा.ललितकुमार दास यतिबेला नेपालदेखि डब्लुएचओसम्म चर्चित बनेका छन् । विश्व नै कोरोना भाइरस समन गर्ने अनुसन्धानमा जुटेका बेलामा यिनी पनि जुटेका छन् र यिनले निकालेको जडीबुटीजन्य औषधि परीक्षण तहमा पुगेको छ ।
नेपाल जडिबुटीको भण्डार हो, यो विश्वलाई थाहा छ । यी डाक्टरले जडिबुटीको माध्यमबाट कोरोना भाइरसको खोप विकास गरेका छन् र परीक्षणमा सफल हुनसक्यो भने यिनले नेपालको नाम विश्व इतिहासमा लेख्नेछन् । यतिबेला नेपालीहरु यिनको खोज सफल होस् भनेर कामना गरिरहेका देखिन्छन् । डा.दासका अनुसार यिनले चैतबाट खोज सुरु गरेका हुन् र खोप तैयार गरिसकेका छन् ।
डा.दासका अनुसार कोरोना भाइरसविरुद्ध केही एन्टिअक्सिडेन्ट एक्टिभिटी र इन्जेमेटिक एक्सन भएको वनस्पति एवं जडीबुटी लिएर शोध गरी खोप तयार गरेको छु । यो अनुसन्धान राज्यको सम्पत्ति हो, यसबारेमा राज्यले अझै विशेष चासो दिएको छैन । जबकि डब्लुएचओले ५ लाख डलर थप अनुसन्धानमा दिनसकिने बताएको छ ।
सुरुमा डा.दासले हर्बल सेनिटाइजरको अध्ययन अनुसन्धान र उत्पादन गर्नुभएको थियो, पछि कोरोना प्रतिरोधी क्षमता बढाउने खोपको समेत विकास गर्नुभएको छ । सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
समाचारअनुसार कोरोना भाइरसविरुद्धको दुई प्रकारको खोप तयार पार्नुभएका डा. दासको अनुसन्धानलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चासो राखेर छलफलसमेत गरेको छ । नेपालसहित विश्वका ७३ देशका अनुसन्धानकर्ता र डब्ल्यूएचओका अनुसन्धान अधिकारीसँग डा. दासले मङ्गलबार भर्चुअल छलफल गर्नुभएको थियो । अव पनि सरकारले ध्यान नदिनु भनेको नेपालीको पौरख नचिन्नु हो ।